Imidlalo yeFossil: Iwatchwatch yokuqala ene-Snapdragon Wear 3100 | I-Androidsis
UEder Ferreño | | Izixhobo ze-Android, SmartWatch
Imakethi ye-smartwatch iyaqhubeka nokukhula, ngokufika kwezindululo ezintsha. I-Wear OS iyaqhubeka nokukhangela indawo yayo kwintengiso, kunye nokufika kwe Iprosesa efana neSpapdragon Wear 3100 lolunye ukonyusa kweli candelo. Okokugqibela, namhlanje sele sifumene iwotshi entsha enale processor kunye nenkqubo yokusebenza. Imalunga neMidlalo yeFossil.
Iba ngumlindo wokuqala wokukhupha iprosesa yeQualcomm, zininzi iinkangeleko ezikhoyo ngoku. Imidlalo yeFossil iboniswa njengewotshi enomtsalane, yanamhlanje kwaye icocekile, kodwa ethembisa ukuthobela ngokupheleleyo kwinqanaba lobuchwephesha, ngenxa yale processor.
Uyilo luphawu oluphambili lokubukela, olubonakala ikakhulu ekusebenziseni umbala. Kuya kubakho ubungakanani beefowuni ezimbini ezikhoyo, i-41 kunye ne-43 millimeters, ukuba ikhethwe ngabasebenzisi. Ngokubhekisele kwimibala, sifumana ukhetho oluhlaza okwesibhakabhaka, ngwevu, bomvu, pinki naluhlaza. Ke kukho into kuwo wonke umntu ngale wotshi. Kwizintambo lo mbala kunye neendlela ezininzi ziyafakwa, kuba kuyakubakho imitya engama-28 eyahlukeneyo kulo Mdlalo weFossil.
Kukho idatha eninzi kule wotshi engekabonelelwa yinkampani uqobo. Kukhankanyiwe ukuba le Fossil Sport iya kuyo bonelela ngokuzimela kwemini epheleleyo ngentlawulo enye. Ukuba sisebenzisa imo yokonga, oku kuzimela kuya kuba ziintsuku ezimbini. Ngokwemisebenzi, sifumana i-GPS, isivamvo sokubetha kwentliziyo kunye neminye imisebenzi esiyifumana kwiiwotshi eziyilelwe imidlalo.
Ukuhambelana kuyahlangabezana nokulindelweyo, kuba siya kuba nakho ukuyisebenzisa ngeefowuni ze-Android ezineenguqulelo ezilinganayo okanye ezingaphezulu kweKitKat 4.4, ngelixa iya kuhambelana neenguqulelo ze-iOS 9.3 okanye ngaphezulu. Okwangoku kunjalo I-United Kingdom yeyokuqala kunye nentengiso apho ukuqaliswa kwayo kuqinisekisiwe.
Iza kuphehlelelwa ngokusesikweni elizweni nge-12 kaNovemba, Ngexabiso lama-249 eepawundi, malunga nama-285 eeuros zokutshintsha. Siza kujonga ukumiliselwa kwale Fossil Watch kwezinye iimarike zaseYurophu, into ekufuneka yenzekile kwiiveki ezizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » SmartWatch » Imidlalo yeFossil: Nxiba i-OS kunye ne-Snapdragon Wear 3100 yale smartwatch